10 zvikuru zvinoshamisa kutamba pose
Kufamba munyika, isu tinyatsoziva dzakasiyana. Zvokudya, mutauro uye mavakirwo kukuratidzai nhoroondo nemagariro, mimhanzi uye kutamba kunogona kunzwisiswa chete kuburikidza racho. Shongai yakanakisisa inoita yako kutamba uye kutama muviri wako arohwa pamusoro catchy mumhanzi, inova inoitika chete zvakanaka munyika yose kutamba.
Pasinei nokuti Capoeira anoonekwa kuva kudhanzi, chokwadi ndiko rechiuto unyanzvi. It dzakatangira Brazil, pakupedzisira zvakazivikanwa munyika yose. Paaiita kufamba kwakadaro, panguva iyoyo vanhu vari kurwa uye kutamba. Uyu akasimba chaizvo kutamba, izvo zvinosanganisira mutambo musi chaiwo zviridzwa, muchiimba uye kufamba. Kunyange anotarisa nyore chaizvo, chokwadi, kuita mapato akadaro vanoda tsika.
Salsa, Latin America
Izvi seksikäs Kutamba kubva muLatin America kunosanganisira matanho akasiyana (richizonzi - "sanganisa"). Salsa anosanganisa zviri Cuban vachitamba akawanda akava akakurumbira munyika yose. Kakawanda unogona kunzwa zvakawanda mimhanzi yakafanana panguva mune tiende kumanaitikirabhu. Hazvinei ukasarudza munhu chaiwo kana ano shanduro, imi munoziva kuti Salsa achaita yekudyidzana kuvandudza manzwiro ako!
Kutamba ichi chakavakirwa mumhanzi chaiyo dzakatangira varombo Munzvimbo Havana. Rumba yakatanga kufambira mberi, vakakurumidza kuwedzera kukurumbira. Hazvishamisi, waibatanidzwa ndandanda chaiwo ballroom kutamba, iye anonzi imwe yakanakisisa nokutamba, iyo unogona rudo rwenyu uye chido. Tanga pachako bato wako somoto fambisa rumba!
Chinhu chokutanga chandinoyeuka paunonzwa zita - iri cabaret uye "Moulin Rouge" pamwe ushingiwo vakadzi pachikuva. Izvi rakaoma chaizvo nokutamba kuti chinokwezva kubva pasi pose zviuru vaoni. Cuernavaca - zviri kwete kumutsa makumbo pamusoro incredible pakakwirira uye unopinza majana, asiwo akirobhatikisi. Zvakaoma chaizvo.
Zviri nyika chido, uye ichi ndipo tinosvika "moto" kutamba. Nokuti ichi Spanish muri vanoda nziyo vane gitare. Zvichida kare munoziva kuti Flamenco zviri inozivikanwa kwayo frilly madhirezi, donje uye kuzvishandisa tsikwa netsoka.
Belly kutamba, Egypt
Nepo izvi unyanzvi, saka kutaura, kugadzira nzira yavo kuburikidza yose, kutamba chakaitwa chete vakadzi. Kare, raiva mhando zvinovaraidza panguva nevoruzhinji mhemberero. Zvino sechinhu kwazvo kutamba, zvisina nyore chaizvo kufungidzira vateereri pakubwinya kwayo zvose, nekuti hazvina chete mudumbu, asi pamusoro muhudyu epurasitiki kufamba.
Patinofunga reggae, kamwe imwe kushamwaridzana mumhanzi Bob Marley vake. vanhu vashoma vanoziva kuti sezvo reggae kudhanzi ane pandaida yayo, rakafanana wokugadzira R & b. Kana wagadzirira kuti varove ichitamba pasi, chete kuzorora uye kutevera mutinhimira!
Kana iwe Fancy kutamba, asi waltz raro kwairayirwa uye pachena zvinoriumba. Izvi Kutamba chekare anodzidziswa vose vanhu munzanga muzana remakore rechi16. Pamwe nhasi hazvina nevakawanda zvakadaro, asi zvakakosha kuti funga kuti waltz chakaitwa purogiramu ballroom kudhanzi makwikwi pose. Chikuru chinhu - ndiko kuti kuyeuka muitiro wenguva dzose, "mumwe-maviri namatatu" uye kodzero yokutaura kuti kusarudza shamwari.
Sora rinowawa, Czech Republic
Kutamba ichi remakore rechi19, nokukurumidza kupararira kuburikidza Europe nokuda kwayo hwokumhanyamhanya nesimba kufamba. Unogona kunzwa zvakasiyana zvakawanda Sora rinowawa yose Eastern Europe ne musicians siyana.
Tango - kutamba kukuru, nokuti iro unogona kutarisa nokusingaperi, uye kunyange zviri nani - kutamba. mumhanzi zvakanaka uye nyama kufamba munyanye kudanana manzwiro. Tsvaka shamwari, batidza mumhanzi uye inopedza mutinhimira.
Tips sei kudzidza kunyora Portraits (kwete mbiri kana mari)
Biography pamusoro Sandro Botticelli. mabasa ake vanozivikanwa rose
Chikoro Home kuti kupenda: Paint matsutso - penzura uye pendi
Sei kuwana mumeporo shizha pachayo?
How kuzochera chakanaka Barbie?
Kapukanana. How kuzochera? The hwakadzama Implementation Matanho
Tasty uye utano divi dhishi pakudya: Cooking norudo.
School Ukama: shamwari chaidzo
Wepfungwa Veronica Stepanova: Biography, upenyu hwomunhu
Zvinyorwa zvinokanganisa - rubatsiro rwekukurumidzira pahutano
Iko inokosha zvikuru yeIrish inokanda
Find chinangwa wokuyera: ndezvipi nzira basa chipimo
Restaurant "Old Castle": iri sezvechinyakare kunonakidza
SRO: Ndezvipi masangano anozvigadzirisa?
Ikakuruma - a chairema mashoko
"Nokia Lyumiya 925": unhu, photo, wongororo
Puree puree "Spelenok": mhinduro, mapepa, kuumbwa uye mugadziri
Kukotsira: kutsumwaira chirwere. Zvirwere zvokurwara remakore uye